मेरो उपचार खर्च म आफै बेहोर्छु, नागरिकप्रतिको कर्तव्य सरकारले पुरा गरोस् - डा. गोविन्द केसी
मेरो उपचार खर्च म आफै बेहोर्छु, नागरिकप्रतिको कर्तव्य सरकारले पुरा गरोस् – डा. गोविन्द केसी
२९ कात्तिक, काठमाडौं । कोरोना संक्रमित भएका डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो उपचार खर्च आफै बेहोर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज ट्वीटरमार्फत डा. केसीलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभकाे कामना गर्दै उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहाेर्ने बताएका थिए । त्यसलगत्तै डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नाे उपचार खर्च आफैं बेहाेर्ने जानकारी दिएका हुन् । उनले सरकारलाई बरु आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
“म कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएपछि प्रम केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको स्वास्थलाभको शुभकामना सन्देशको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । सरकारले मेरो उपचार खर्च बेहोर्छु भनेको सन्दर्भमा भने मेरो उपचार खर्च म आफैँ बेहोर्छु बरु सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य पूरा गरोस्,” डा. केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
उनले सरकारको ध्यान व्यक्ति विशेषको उपचार खर्च बेहोर्नुभन्दा सबै विपन्न नागरिकको उपचार खर्च बेहोर्नेमा हुनुपर्ने बताएका छन् । “कोरोना संक्रमित विपन्न र दूरदराजका नागरिक जसलाई निःशुल्क उपचार आवश्यक छ उनीहरुले अहिलेसम्म उपचार पाउन सकेका छैनन् । त्यसो हुनाले अझै पनि सरकारको ध्यान व्यक्ति विशेषको उपचार खर्च बेहोर्नुभन्दा सबै विपन्न नागरिकको उपचार खर्च बेहोर्नेमा हुनुपर्दछ,” डा. केसीकाे भनाइ छ ।
उनले थप भनेका छन्, “हामीसँग पटक-पटक गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन भएको भए देशका दूरदराजदेखि सबै भेगमा ठूला सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज बन्ने थिए । साथै, त्यहाँका नागरिकले कोरोना साथसाथै सम्पूर्ण रोगहरुको गुणस्तरीय, निःशुल्क, सर्वसुलभ स्वास्थ सेवा पाउने थिए। तसर्थ, हामीसँग १९ औँ सत्याग्रहमा भएका सम्झौता यथाशीघ्र कार्यन्वयन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।”
उनी अहिले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको गणेशमान सिंह भवनमा भर्ना भई उपचार गराइरहेका छन् । रुघाखोकी तथा ज्वरो आएपछि बिहीबार गरिएकाे पीसीआर परीक्षणबाट डा. केसीलाई काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे थियाे ।
उत्तर कोरियाली नेताकी श्रीमती एक वर्षपछि कन्सर्टमा देखिइन्
टोखामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या १३ सय नाघ्यो
सेवा प्रवाह प्रभावकारी र स्तरीय बनाउन स्थानीय नागरिकले वडामाथि निगरानी राख्न थाले
पानीको मूल्य तीन गुणा बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन
चेन्नईसँग राजस्थान रोयल्स ४५ रनले पराजित